Madaxweyne Laftagareen iyo wafdi uu hoggaaminayo oo soo gaaray Muqdisho +( SAWIRRO) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Madaxweyne Laftagareen iyo wafdi uu hoggaaminayo oo soo gaaray Muqdisho +( SAWIRRO)
Madaxweyne Laftagareen iyo wafdi uu hoggaaminayo oo soo gaaray Muqdisho +( SAWIRRO)
Muqdisho (Halqaran.com) – Madaxweynaha Dowlad goboleedka, Koonfur Galbeed Soomaaliya, Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed (Laftagareen) iy wafdi uu hoggaaminayo ayaa galabta soo gaaray magaalada Muqdisho.
Wafdiga uu hoggaaminayo Madaxweyne Laftagareen ayaa ka soo duulay magaalada Baydhabo, waxaana si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde International ee Muqdisho.
Waxaana ka qeybqaatay soo dhaweyntiisa, Wasiirro, Xildhibaanno, Siyaasiyiin iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo shir jaraa’id ku qabtay hoolka nasashada ee Garoonka Aadan Cadde ayaa u mahadceliyay Wasiirardii, Xildhibaannadii iyo dhammaanba dadkii kale ee maanta ku soo dhaweeyay Garoonka Magaalada Muqidsho.
Mar uu ka hadlayay ujeedada ay u yimaadeen magaalada Muqdisho ayuu ku sheegay inay la xiriirto arrimo shaqo oo isugu jira wadatashi iyo fatahadaha ka dhashay Webiga Shabelle, ee sida weyn u saameeyay qaybo ka mid ah Gobolka Shabellaha Hoose.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Laftagareen ayaa xusay inay qorsheynayaan in booqasho ku taggaan dhulka Gobolka Shabellaha Hoose, ee sida weyn uu u saameeyay Webiga Shabelle.